Te hoderaina ka mideradera… | NewsMada
Te hoderaina ka mideradera…
Mahomby amin’ny asany, araka izay andrasana sy takin’ny vahoaka aminy, ve izao fitondrana izao? Eo ny tsirairay hitsara, raha miova ho amin’ny fahatsarana sy fahamorana kokoa noho ny teo aloha ny fiainana andavanandro.
Ny mahavariana sy mahavalalanina, mihamaro sy mivandravandra ny fisian’ny mpisolelaka na mila ranondranony tato ho ato. Fitondrana mahomby sy mahavita zavatra izany kosa ve? Tsy mahagaga raha dokafana, abontsina…
Na hita miharihary fa tsy mahomby na mandiso fanantenana ny vahoaka amin’ny ataony aza izao fitondrana izao, ka be ny te hanafy sy hanafina izany amin’ny fanohanana befahatany sy fisolelahana hoe be zava-bita, miasa, mahomby…
Inona no marina ny amin’izany? Na mahomby na tsia ny mpitondra, na misy na tsia ny asa vita… Na ahoana na ahoana, tsy ilaozan’izay mpisolelaka sy mpila dera ka midera: te hifikitra amin’ny seza, te hahazo toerana.
Na mandoka na manaboka, samy ratsy avokoa: tsy milaza ny marina sy ny tena zava-misy. Zava-doza imasomaso noho ny lainga ny filan-dera: fanaovana tatitra vilana sy diso amin’ny mpitondra sy ny vahoaka… samy voafitaka.
Matetika, ireo tsy manao ahoana loatra amin’ny ataony sy ny asany no fatra-pisolelaka. Na mihevi-tena ho zavatra amin’izany… Mila toerana tsaratsara kokoa? Te hoderaina ka mideradera amin’ny alalan’ny lainga sy fitaka.
Marina ve anefa izay lazainy? Na izay iheverany ny tenany na ny momba ny mpitondra sy ny zava-bitany… Araka ny fijerin’ny sasany: tsy izay aseho na miseho loatra no tena maha izy azy ny tsirairay, fa izay afenina.
Amin’izany, zava-doza koa ny midera tena. Tsy hafa fa midera tena ho mahita sy mahalala ny marina ny te hoderaina ka midera mpitondra. Mitady hahazo vahana izay fiderana tena, filana dera na fiderana amin’ny mpitondra izay izao?
Aleo ny vahoaka hitsara raha tena misy tokoa ny fihatsaram-piainana amin’izao fitondrana izao. Tsy marina avokoa izay miteny sy lazaina rehetra. Raha ny marina rehetra tsy filaza avokoa. Ny lainga izany no mivoaka etsy sy eroa?